Mmetụta Marketingzụ Ahịa | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 13, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Statisticsfọdụ na-adọrọ mmasị ọnụ ọgụgụ metụtara na okwu ọnụ ahịa. N'uche m, nke a bụ atụmatụ azụmaahịa kachasị elelị nke nwere, enwere ike, mmetụta kachasị elu. Lọ ọrụ, ngwaahịa na ọrụ kwesiri ekwupụta skyrocket na ewu ewu n'ihi ọwa a dị egwu. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na ọbịbịa nke mgbasa ozi mmekọrịta, mmetụta na-ejegharị na ọsọ nke ìhè.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ nwere ihe ị nwere dị ịrịba ama, ndị mmadụ ga- ekwu. Mgbe okwu ndị ahụ na-ewepụta ire ahịa, ọ nweghị ọwa ọzọ nwere ike ịbịaru ibelata ọnụ ahịa gị na iduzi ahịa.
Igodo nke usoro a bụ ịchọta ndị bụ isi nke nwere ike itinye ọkụ na mbọ ị na-agba. Usoro dị ka Klout na Appinions amalitela, na-anwa ịchọpụta ndị na - eme ihe ike site na algorithms na ọnụ ọgụgụ dị iche iche. Nke a bụ ahịa na-eto eto nwere ọtụtụ ohere.
Ihe nzuzu nke uto na ewu ewu nke ọwa a bụ na ọ bụ, ọzọ, na-eweta atụmatụ ọdịnaya, gụnyere mgbasa ozi mmekọrịta na ịde blọgụ, na-ebute ụzọ nke ịmepụta okwu ọnụ ahịa na mmetụta mgbasa ozi.